ओली निवासमा विप्लव समूहका नेताहरू, के भयाे छलफल ? « News24 : Premium News Channel
ओली निवासमा विप्लव समूहका नेताहरू, के भयाे छलफल ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र उनी नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुबीच बालकोटस्थित ओली निवासमै पुगेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न आज (मंगलबार) विहान विप्लवसहितका नेताहरु बालकोट पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यहाँ उनीहरुले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीसँग विगतमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । उक्त क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको भएको सहमति अनुसार नै आफूहरु अघि बढ्न चाहेको विप्लव पक्षका नेताहरुले बताएका थिए ।
गत फागुन १ गते ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर विप्लव भूमिगत गतिविधिबाट मूलधारमा आएका थिए । तर उक्त सहमति अनुसार विप्लवका नेता-कार्यकर्ताहरु अझै पनि जेलबाट नछुटेको भन्दै ओलीसँग गुनासो गरिएको भेटमा सहभागी एक नेताले बताए । तर अध्यक्ष ओलीले भने कानूनी जटिलताका कारण सहमति पालनामा ढिलाइ भएको बताए ।
भेटमा विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र धमेन्द्र बाँस्तोला पनि सहभागी रहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय विप्लव प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु तथा पूर्व सहकर्मीहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।